टुल्कुपछि विखण्डित ल्याएका आचार्य भन्छन्, –‘मध्यरातमा सिर्जना गर्दा आनन्द’-Nagarikaawaj.com
टुल्कुपछि विखण्डित ल्याएका आचार्य भन्छन्, –‘मध्यरातमा सिर्जना गर्दा आनन्द’
होमराज आचार्य एउटा साहित्यकार मात्रै हैनन विश्वकै शक्तीशाली देश मानिने अमेरीका अन्र्तगत वासिङट डिसी डिपार्टमेन्ट अफ एजुकेशनमा वरिष्ठ नितीगत सल्लाहकारको रुपमा समेत काम सम्हालेका व्यक्ती हुन् । कपिलवस्तुको वुड्डी गाविसमा जन्मीएका आचार्यका निर्दोश कैदी, कविता सग्रह ‘जिवीत ककांल, आलु वारीमा देवता, टुल्कु लगाएतका उपन्यास लगाएतका कृतीहरु प्रकाशित भैसकेका छन् । त्यस वाहेक ईङ्लीसमा कोकोकला नामक कृती पनि वजारमा आएको छ । उहाँले लेखेको एउटा कविता त्रि.वी अन्र्तगत स्नातकोत्तरदोस्रो वर्षको एजुकेशनलको मेजर ईङ्लीसमा समेत विद्यार्थीहरुले पढ्नुपर्छ । लामा समयसम्म अमेरीकाको शिक्षा, साहित्य, समाजसेवा, सार्वजनिक निती निर्माणको क्षेत्रमा योगदान पु¥याएका उनै वरिष्ठ साहित्यकार आचार्यसँग पत्रकार रामजी ज्ञवालीले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अशं–
तपाई अमेरीकाको शिक्षाक्षेत्रलाई राम्रोसँग वुझ्नुभएको छ, यहाँ र त्यहाँको शिक्षा क्षेत्रमा के के फरक छन होला ?
– सुरुमा त नेपालको शिक्षा क्षेत्र त्यहाँको सँग तुलना गर्ने खालको छदैछैन । नेपालको पढ्ने खालको शिक्षा मात्रै छ, विश्लेषणात्मक शिक्षाको विकास हुन सकेको छैन । म्यानेजमेन्ट सिस्टममा अझैपनि पढाई हुन नसक्दा डिग्री अध्ययन गर्नेहरु पनि विदेश पलायन हुनुपर्ने वाध्यता छ । हरेक स्कुल क्याम्पसहरुमा राजनिती हावि छ, चाहे विद्यार्थी होस चाहे शिक्षक । तर अमेरीकाको शिक्षा व्यवहारीक र विश्लेषणात्मक खालको छ, राजनिती भन्ने कुरा शिक्षाक्षेत्रमा हुदैहुदैन । यदि अमेरीकाको जस्तो शिक्षा क्षेत्र यहाँ हुन्थ्यो भने नेपाल अहिले यो स्थितीमा हुदैनथियो । अर्को कुरा यहाँ परिक्षा पासु हुनु र मार्क धेरै ल्याउनुलाई ठुलो मानिन्छ तर त्यहाँ त्यस्तो हुदैन । परिक्षा पास गरेको र मार्क धेरै ल्यायो भन्दैमा मान्छे वुद्धिमान, चलाख हुन्छ भन्नु गलत हो । परिक्षा भनेको त एउटा प्रवेशद्धारमा फसेपछि वाहिर निस्कने प्राविधीक पक्ष मात्रै हो । तर हाम्रो यहाँको यस्तैलाई सर्वस्व ठानेको पाईन्छ । यहि कारणलेनै हाम्रो शिक्षा प्रणाली र शिक्षाले दिएको खुराक सवै प्रवावहिन भएको छ । त्यही भएकालेनै अहिले उसएलसि परिक्षामा ४० प्रतिशत मात्रै पास भएका हुन । साच्चीकै भन्नेहो भने नेपालको शिक्षा प्रणाली मान्छेलाई असफल वनाउने फ्याक्ट्रि हो । यहाँका खाली पास फेल गराउने वाहेकको शिक्षा छैन । न उत्पादन मुलक काममा प्रयोग हुन्छ यहाँको शिक्षा । १०० जनामा ४० जना पास हुनु भनेको कति दुःखको कुरा हो भन्नुसन । यस्तो शिक्षाले व्यक्तीका आत्मसम्मान कसरी वढ्छ ? । सम्भवत म पनि अवको केही वर्षमा नेपालको शिषा क्षेत्रलाई सुधार गर्नका लागी वसाईसराईनै गरेर आउदैछु ।
अव अमेरीका नवस्ने ?, किन त्यहा छाडेर आउदै हुनुहुन्छ ?
– म जुन हिसावले त्यहा वसेको थिए । अव तयसरी वस्दैन । धेरै नेपालीहरले सोच्नुहुन्छ होला पनि किन अमेरीका छाडेर नेपाल आउदैछ भनेर । खासमा त नेपालीहरुको नेगेटिभ साच्ने वानी छ । सवै पैसाका पछाडि र अर्काको देशमा पुगेर नाम कमाउँछन जस्तो लाग्दैन । म फर्किन लागेको कारण चाहि फरक छ । ईज्यत, सुःख, रमाईलो भएपछि यहाँ जस्तो हुदैन । आफ्नो नेपालको मायाँ वढि हुन्छ । नेपाललाईनै हरेक क्षेत्रवाट विकशित गराउँ भन्ने हुन्छ । मेरो छोरो समेत यहाँ आएर पढ्न थालिसकेको छ । मलाई अहिले आएर यहाँ अनुभवि र योगदान गर्ने खालका माछे चाहिएको अनुभुति भएको छ । धेरै फर्किन अफ्ट्यारो मानेपछि म चाहि नेपालकै चिन्ताको कारण फर्किन लागेको हुँ ।
नेपालीहरुको नकारात्मक सोच्ने किन वढेको जस्तो लाग्यो तपाईलाई ?
– यहाँ रातारात धनि वन्ने सपना वुनेका हुन्छन् । राजनिती यस्तो खालको छ । भष्ट्राचार व्याप्त छ । निच सोचाई छ । सुःख सुविधालाई ठुलो ठान्छन् । मलाई लाग्छ सवै मान्छे धनि भए भने चाहि यस्तो हुदैन होला । यो देश कसरी सम्पन्न हुन्छ भनेर म पनि लाग्दैछु नेपालमै ।
नेपालको अवको शिक्षाक्षेत्रलाई कस्तो गराउने सोच छ तपाईको ?
– यहाँको शिक्षा क्षेत्रलाई गुणस्तरिय वनाउन चार्टर एजुकेसन सिस्टम को तयारी गरेको छु । जस्तो कि ३÷३ वर्षमा एजुकेसनको मान्यता हुन्छ भने स्कुलको पढाई, परिक्षा लगाएत धेरै कुराकाने अडिट पनि भैरहन्छ । खासमा शिक्षाको वैकल्पिक प्रशासन प्रणालीको रुपमा यसलाई लिईएको छ । यस्तो गर्नेहो भने निकै राम्रो हुन्छ । नेपालको शिक्षादिने उदेश्य एकातिर र राजनितीको प्राथमिकता अर्कातिर गएको छ ।
थोरै तपाईको साहित्यसँग जोडिएर कुराकानी गरौन, कतिवेला रचना गर्नुहुन्छ साहित्यीक सृजना, त्यस्तो कुनै समय ?
– साहित्यीक सृजना कुन वेला फुर्छन भन्ने त्यस्तो खास समय हुदैन । कतिवेला सोचमा आउछ र टिपीन्छ भन्ने कुरा हो । केही अनौठो तरिका छ यो मामिलामा । केही आकाशमाथी उड्दा , केही कफी शपमा, केही केही रेलमा वस्दा लेखीएका धेरै रचना हरु छन् । तर पनि तपाईले सोध्नुभएको जस्तो मैले कफिशपमा एक्लै वसेर रचना गर्दा चाहि वढी फुर्छन । यदि घरमा भए भने राती ११ वजेदेखी २ वजेसम्म सवै सुतीसकेपछि रचना गर्न र सोच्न थाल्छु । कफिसपनमा नजिकै कुर्चीमा वसेर चिया पिईरहेका अरु व्यक्तीहरुका कुराकानी सुनेर लेख्दा धेरै आन्द पनि आउँछ ।
अहिले नयाँ कृती वजारमा ल्याउने तयारीमा हुनुहुन्छ, टुल्कु नपढेकालाई टुल्कुको वारेमा र नयाँ कृतीको वारेमा पनि भनिदिनुसन् ?
– मेरो तेस्रो उपन्यास विखण्डित छिट्टै बजारमा आउँदै छ | सुरुमा यसको शीर्षक द्वन्दात्मा थियो | उपन्यासको भूमिका डा. गोबिन्द भट्टराईज्यूले लेख्नु भएको छ | यस उपन्यासको प्रकाशन पछि मसंग दीपंकर , शेखरको चिठी, बिजनेस कार्ड र लभ ह्यान्डल गरी ४ वोटा उपन्यासको पाण्डुलिपि उपलब्ध रहने छन् | र टुल्कुको कुरा गर्दा मैले अहिलेसम्म जति पाठकहरुवाट प्रतिक्रीया पाएको छु एकदमै राम्रो प्रतिक्रीया पाएको छु । धेरैलेनै मन पराउनुभएको छ । यो अत्यन्तै दार्शनिक खालको छ । मानविय अवस्थालाई धेरैतर्फवाट लेखेको छु । एउटै व्यक्तीमा हुने वहु आयामिक चरित्रलाई देखाउन खोजेको छु ।
नेपालको साहित्यीक विधा किन अझैपनि परम्परागत रुपमै चल्या छ ?
– सहि कुरा गर्नुभयो । परम्परागत रुपमै चलया हो । यहि भएको कारणलेनै यहाँको साहितय माथी उठ्न नसकेको हो । यो विषयमा लेखीयो भने त्यो हुन्छ र यस्तो लेख्दा त्यस्तो हुन्छ भन्ने छैन । पुराना पुस्ता जो सँग शक्ती र प्रभाव पार्न सक्छ उनि पनि छन् । विद्रोह गर्ने नयाँ शक्ती आफैलाई कमजोर वनाउदैछन् । खासमा युवाहरुको यो क्षेत्रमा सोच हराउदै गएको छ, सोच कम छ । पढ्ने सँस्कारै छैन । नेपाली युवाहरु झनपछि झन अल्छी वन्दै गएका छन् । फरक धारमा फरक ढगंले लेख्ने कस्ले त अव ? । युवाहरुमा जोशजागरको कमीलेनै जुन तहवाट साहित्यीक विधा अगाडी वढ्नुपर्नेहो वढेको छैन ।
अन्त्यमा, नेपाली युवाहरु किन अझैपनि आत्मनिर्देशित हुन सकेका छैन होला ?
– कारण भनेको शिक्षा नै हो । जसले गर्दा युवाहरु आत्मनिर्देशित हुन नसकेका हुन । युवाहरु पुराना ढर्राकै छन् । समय अनुसार फेरीन सकेका छैनन । अर्काले गरिदिए हुन्थ्यो, अर्काले सिकाईदिए हुन्थ्यो, अर्काले दिए हुनथ्यो भन्ने खालकै छन । शिक्षा प्रभावकारीनै छैन । पुरानो ढर्रालाई तोड्न सके मात्रै नेपाली युवाह वन्छन् नत्र गाह्रो छ । जे चलेको छ चलिरहन्छ भन्दै अगाडी वढ्नेछन् । सृजना गर्ने खालको क्षमता छैन यहाँका युवाहरुमा । तर अमेरीका लगाएत अन्य विकशित मुलुकका युवाहरु फरक खालका छन् । युवा भनेका देश हाक्ने व्यक्ती हुन भन्ने तर त्यस्तो खालको शिक्षा, उर्जा दिन अग्रज व्यक्तीहरु नमान्ने । कसरी सक्छन देश सम्हाल्न । कसरी वन्छ देश ।